Taliska Xoogga Dalka iyo Al shabaab oo ka hadlay dagaalkii maanta ku dhexmaray Ceel Saliini – Somali Top News
Taliska Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa war kasoo saaray weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen Saldhig Ciidamada Dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Ceel-Saliini ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa daabacday in Al-Shabaab Khasaare lagu gaarsiiyay weerarkii ay ku qaadeen Saldhigga Militariga Dowladda ay ku leeyihiin deeganaka Ceel-Saliini.
Waxaana intaa lagu daray in Ciidamada Xoogga Soomaaliya oo ka feejigan weerarka Al-Shabaab in ay kahor tageen, isla markaana ay gaarsiiyeen Dhimasho iyo dhaawac, sida hadalka loo dhigay.
Dhinaca kale, warka kasoo baxay Taliska Ciidamada Xoogga waxa lagu faah-faahiyay howlgal Ciidamada ay ku qabsadeen deegaanada Dharsheenley, Bandar, Farkeerow, Xero koowaad iyo Xero labaad oo kamid ah tuulooyinka hoostaga Degmada Qoryooley.
Al-Shabaab dhankooda war ay ku daabaceen warbaahintooda waxa ay ku sheegteen in ay qabsadeen Saldhigga Ciidamada Militariga Dowladda ay ku leeyihiin Deegaanka Ceel-Saliini ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Waxa ay sheegteen Al-Shabaab in ay khasaare naf iyo mid maaliyadeed ay u geysteen Ciidamada Dowladda, ayna qabsadeen Saldhigga Ciidamada Dowladda ee Deegaanka Ceel-Saliini.
Weerarka Al-Shabaab ay qaadeen oo ahaa mid ku bilawday gaari walxaha qarxa ay kusoo rareen, waxa ay sheegeen in ay ku dhufteen mid kamid ah difaacyada Ciidamada Dowladda ee ku sugan Xerada Ceel-Saliini.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dileen Ku dhawaad 20 askari, halka ay sheegteen in ay gubeen lix kamid ah gaadiidka Ciidamada Dowladda oo xerada yaallay sida ay hadalka u dhigeen.
Ma jiro ilo ka madax banaan Taliska Ciidamada Xoogga Dalka iyo Al-Shabaab oo xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay Deegaanka Ceel-Saliini ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
← Akhriso: Qorshaha wasiirka maaliyadda Itoobiya oo ku sugan Hargeysa
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Kormeeray Xarunta Dhexe Ee Xukuumadda Oo Dib Loo Dhisayo →
Hadal-jeedinta Musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland oo goordhow bilaabaneysa+Sawirro
Wararkii ugu dambeeyay kulumada madaxweyne Farmaajo ee magaalada Garoowe